Banyere Anyị - Hebei Chaoyue Standard fastener akpụzi Co., Ltd.
Hebei Chaoyue Standard Fastener akpụzi Co., Ltd. e guzobere na 2008,
emi odude ke zhaogeda ulo oru ebe nke beihan township renqiu Hebei. A pụrụ iche ịghasa ebu emeputa na mmebe nke akpụ moulds.With ngụkọta ego nke 5 nde US dollas, ala ekpuchi ebe nke 12800 m2, mmepụta omumuihe uzo nke 7200 m2. Nso Beijing banyere 150KM, Tianjin banyere 100KM.
AKWTKWỌ, NTALKWU, GOBỌROD ỌMA, WIN-WIN, Ahịa ahịa, na-agbaso usoro ihe ọmụma azụmahịa.Drara nye ụlọ ọrụ ngwa ngwa ma na-emeju ndị ahịa ọ bụla ezigbo mma na ọrụ kacha mma.
Ejiri usoro nke PVD dị elu igwe eji arụ ọrụ sitere na USA.
Lọ ọrụ ndị ọzọ jikọtara iji jikọta usoro mmepụta zuru ezu, dịka CNC lathes, akpaka grinder, cnc punch press, ọkụ ọkụ na-agwụ ike, na igwe CNC ndị ọzọ. Ngwá ọrụ nyocha ndị ọzọ, iji hụ na ọ dị mma nke ngwaahịa.We nwere ndị ọrụ aka ọrụ siri ike na ndị otu njikwa, ma jiri usoro mmepụta kọmputa, iji mejuputa usoro njikwa ụlọ ọrụ nke oge a. Anyị na-erite uru nke softwares kachasị ọhụrụ dị ka CAD / CAM, Solidworks , iji mee teknụzụ dị elu site n'aka ndị injinia ndị ọkachamara, ndị ọkachamara na-ahụ maka ọgwụgwọ ọkụ na ndị maara etu esi emepụta ya.
Companylọ ọrụ ahụ bụ ọrụ ndị isi na R&D
n'ichepụta na ire ahia nke ihe nkuputa nkụnye eji isi mee ya na mkpuchi TiAIN ma mekwaa ebu. Kpụrụ GB, JIS, ANSI, DIN, BS, ISO. Ckpụrụ isi dị iche iche gụnyere Phillps, Slot, Pozi, Hexagon, Torx. Kwa afọ mmepụta ike ruo 2.5 nde iberibe maka ọkọlọtọ nke abụọ punch.Furthermore, anyị na-nọgidere na-agbalịsi maka creativity na ọhụrụ ịzụlite ọzọ nkenke Ebu, na merie aha ọma na ahịa, Karịsịa nke abụọ ntụmadị maka drywall ịghasa, JDW 270F, nwa mkpuchi 12 * 25, mmepụta nke kposara banyere 150,000-180,000 iberibe.
Ngwaahịa anyị na-ekpuchi ntụpọ nke abụọ, Isi na-anwụ,
Mkpịsị aka nke mbụ, onye na-egbu ihe, onye na-egbu ihe, onye na-akụ azụ, ihe na-eme ka ịnwụ anwụ, Trimming die, Waya na-ese anwụ. . Na mgbakwunye na ọkọlọtọ ndị a nkọwa. Non-ọkọlọtọ ebu nwekwara ike ọnọ site ahịa ịbịaru & arịrịọ.
Họrọ Chaoyue mould.We na-ebelata ihe mgbochi na ụgwọ maka ịkpụzi na mmepụta na imewe gị.
Afọ ojuju gị bụ ịchụso ndị ọrụ Chaoyue ebighi ebi, anyị dị njikere ịbụ ezigbo onye ibe gị na ezigbo enyi gị.